Mumbo Jambo လာလေရော့ – KZ’s ကြည့်မိသမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Mumbo Jambo လာလေရော့ – KZ’s ကြည့်မိသမျှ
Mumbo Jambo လာလေရော့ – KZ’s ကြည့်မိသမျှ
Posted by ဇီဇီ on May 16, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Entertainment, Money & Finance, Movies/TV, Society & Lifestyle | 34 comments
မျက်လှည့် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင် ထဲက စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ကျန်ပြီး ပွါးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင် ၃ ကား ရှိတယ်ဗျ။
Edward Norton နဲ့ Jessica Biel ရဲ့ ကားပါ။
1) The Illusionist (2006)
Rating 7.6 ရထားတဲ့ ကားမို့ အဆင့်မနိမ့်လှပါဘူးး…
Edward Norton က ငယ်စဉ် အခါက လမ်းဘေး အဘိုးအို တစ်ယောက်ဆီက မျက်လှည့် သင်ခဲ့ပြီး…
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ ဆွေမျိုးမြင့် မိန်းမပျို Jessica Biel နဲ့ ချစ်ရာက ခိုးပြီး ထွက်ပြေးကြပေမဲ့ ပြန်မိသွားခဲ့တယ်။
အဲလို ပြန်မမိခင်မှာ သူ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး တောင်းဆိုတဲ့ စကားလေး “နင့် မျက်လှည့်ပညာနဲ့ ငါတို့ကို ရှာမတွေ့အောင် လုပ်ပေးပါ” ဆိုတာလေး ကို စိတ်ထိခိုက်ပြီး (သူ မကာကွယ်လိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ။) အဲဒီမြို့ကနေ ထွက်ခွါပြီး မျက်လှည့်ပညာကို ရနိုင်သမျှ ဆည်းပူးခဲ့တယ်။
သူ့ မြို့ ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ချစ်သူက တော်ဝင်မျိုးရိုးက မင်းသား မောက်မောက်မာမာ တစ်ယောက်ရဲ့ သတို့သမီးလောင်းဖြစ်နေပါပြီ။
အဲဒီ တော်ဝင်မင်းသားရဲ့ လူယုံ လိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ Paul Giamatti က တရားမျှတမှု အလိုရှိတဲ့ ရဲအရာရှိမို့ မျက်လှည့်ဆရာနဲ့ မင်းသားကြီး ကြား ဗျာများရတဲ့ သူပါ။
ဒီ ကြားထဲကမှ မျက်လှည့်ပညာရှင်မင်းသားက သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာနဲ့ သူ့ချစ်သူ ကို အဲဒီ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ရအောင် ခိုးပြေးရတာကို လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ ရိုက်သွားတာမို့ ကြည့် လို့ ကောင်းတဲ့ ကားတစ်ကားပါ။
မိတ်ဆက်ရမယ် ဆိုရင် Edward Norton ဟာ Incredible Hulk ရဲ့ မင်းသားဖြစ်ပြီး အနုပညာ ပါတဲ့ မျက်လုံးနဲ့မို့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်လိုက်ဖက်ပြီး
မင်းသမီး Jessica Biel က လှတာထက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မင်းသမီးပါ။ သူတို့ အမူအရာမှာ ပြောစရာမရှိပါဘူးးး
ထူးထူးခြားခြား ပြောချင်တာက ရဲ အရာရှိ Paul Giamatti ပါ။
တစ်ကားလုံး သူ့ရဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ရှိဟန်မပြတဲ့ အမူအရာ၊
အံ့ဩသွားပေမဲ့ ချက်ချင်းဟန်ဆောင်သွားတဲ့ မျက်နှာ အပြောင်းအလဲ စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်မျက်လှည့်ကား တစ်ကားကတော့ မင်းသား/မင်းသမီး ဝိတ်တွေ သုံးထားလို့ နာမည်မြင်ကတည်းက ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ကားပါ။
ဒါရိုက်တာ၊နဲ့ ရိုက်ညွှန်းဆု ရပြီး Rating 8.5 မို့ ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Huge Jackman ရယ် Christian Bale ရယ် ပါဝင်တာမို့ ပျိုပျိုကြီးတွေ ကြိုက်သလို
မင်းသမီးကလည်း သကောင့်သားတွေ အကြိုက် Scarlett Johansson တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Huge Jackman နဲ့ Christian Bale က ဆရာတူ တပည့် ၂ ယောက်ပါ။ Huge Jackman က ဆရာ့ရဲ့သမီးလေးနဲ့ အကြောင်းပါတာမို့ မျက်လှည့်ပြတဲ့ ပွဲတိုင်း အတူတူ ပါဝင်ကြရတယ်ပေါ့လေ။
ဖြစ်ချင်တော့ မျက်လှည့်ပွဲ တစ်ခုမှာ Christian Bale ရဲ့ အမှားတစ်ခု (လို့ ယူဆရတဲ့ လုပ်ရပ်) ကြောင့် ဆရာ့သမီးသေသွားခဲ့ရာက စ Huge Jackman က အညှိုးထားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းလည်း ကွဲကွာသွားပြီး နောက် တစ်ကိုယ်တော် တစ်စင်ထောင်တဲ့ ပြပွဲတွေ မှာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် အပြိုင် ပညာပြရင်း တိုးတက်လာတာလည်း အပြိုင်ပါပဲ။
Huge Jackman က Christian Bale ကို ယှဉ်လို့ မရတဲ့ ပြကွက်တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
ဇာတ်ကား တစ်ဝက်လောက်က သူတို့ ရဲ့ မာစတာ ပိ(စ) ပြကွက်ဖြစ်တဲ့ The Transported Man ကိုပဲ သူ့ထက်သူ အပြိုင် သေသပ်အောင် ပရိတ်သတ်ကို လှည့်စားရမယ် ဆိုတာပဲ ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာကို မပျင်းရအောင် ပြသွားပါတယ်။
နောက်တော့ Christian Bale ရဲ့ ပရောဂ နဲ့ Huge Jackman ခြေထောက်တစ်ဖက် မသန်တဲ့ ဘဝ ရောက်သွားရက သူတို့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ဟာ သူသေ ကိုယ်သေ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
Huge Jackman က သူ့ရဲ့ လူ Scarlett Johansson ကို Christian Bale ဆီ လွှတ်ရာက Scarlett က Christian Bale ဘက် ပါသွားတဲ့ အတွက် ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်ပြီး အဲဒီ ပြကွက်ကို အနိုင်ရဖို့ နည်းလမ်းကို ရေဆုံးမြေဆုံးရှာပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ Christian Bale ရဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားခဲ့ပြီး (ဘာ ကြောင့် ဆိုတာ ဇာတ်သိမ်းမှ သိပါတယ်) Christian Bale လည်း စိတ်ကျနေတဲ့ အချိန်ပါ။
Huge Jackman က Nikola Tesla (အက်ဒီဆင်ထက် အရင် လျှပ်စစ်ကို ရှာတွေ့သော်လည်း နာမည်မပေါက်ခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ် ပညာရှင်) ဆီကနေ စက်ကိရိယာနဲ့ ကိုယ်ခွဲမျက်လှည့်မှာ အောင်မြင်နေပါပြီ။
အဲဒါကို စုံစမ်းဖို့ကတော့ Christian Bale ကိုယ်တိုင် သွားပြီး စုံစမ်း ရှာဖွေရပါတော့တယ်။
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မတုန်း ဆိုတာ တော့ ဆက်ကြည့်ပေါ့နော့။
ဂလောက်ဆိုရင် ဆက်ကြည့်လို့ ရပါပြီ။ ကျနော့တုန်းက ၂ ခါ ပြန်ကြည့်ပြီးမှ ကိုယ် လွတ်သွားတဲ့ ကွန်ဆက်(ပ) ကို ပြန်ဖမ်းရတာပါ။
အမူအရာတွေက အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိ မို့ ဇာတ်ကားက အေးတယ်ထင်ရသော်လည်း တန်းမြင့် ကား တစ်ကားဖြစ်ပါကြောင်းး
နောက်တစ်ကားကတော့ တော်တော်များများ ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။
3) Now you see me (2013)
Rating 7.3 ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်ကို ထူးချွန်တဲ့ မျက်လှည့်ပညာ တစ်ခုဆီနဲ့ ၄ ယောက် က …
သူတို့ မျက်လှည့်ရှိုးမှာတင် ပြင်သစ်ဘဏ် တစ်ခုက ငွေတွေကို ယူပြမယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာပြီး ဘဏ်ကို ဖောက်ဖို့ ကြိုးစားတာတွေ ကို…
အင်တာပို(လ) က အေးဂျင့် ရယ်…
FBI က အေးဂျင့်ရယ်၊…
မျက်လှည့်ပညာရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာကို ရိုက်ပြသွားတာပါ။
တစ်ကားလုံး တောက်လျှောက် မပျင်းရတဲ့ အပြင် နောက်ဆုံးမှာ လှည့်ကွက်တစ်ခု ရှိတာမို့ ကြည့်ပျော်တဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ခု ပါ။
အဲဒီ မျက်လှည့်ဆရာ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Jesse Eisenberg က The Social Network ရုပ်ရှင်မှာလည်း သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
တစ်ကား မှမသိ။ သရုပ်ဆောင် တွေထဲ လဲ စကားလက် တစ်ယောက် ဘဲ သိတယ်။
မျက်လှည့် ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဒီ ၃ ကား ထဲ မှာ အချိန်ရရင် နံပါတ် (၁) ကားလေးတော့ ကြည့်ချင်သား။ :-)))
ကြည့်မယ့် ကြည့် ၃ ကားးလုံးးကြည့်..
ဘာရုပ်​ရှင်​မှ မကြည့်​ဖြစ်​တာ အ​တော်​ကြာပြီ
KZ ​ရေးထားတဲ့ အမြည်း စာညွှန်း​လေးဘဲဖတ်​လိုက်​​တော့တယ်​
1 GB လောက် ဆိုရင် ၁၀ ရက်လောက် ဒေါင်းယူရမယ့် မြန်နှုန်းနဲ့…ဆိုတော့..
မမဂျီးး လူကြုံရင် စီဒီတွေ ပေးးလိုက်မယ်..
လူကြုံနဲ့ copy ဖြစ်ဖြစ် ဘန်းပေးလိုက်ပါနော်
.ဒါမှ မဟုတ်လည်း မမဂျီးကြိုက်တဲ့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတွေအများကြီးကို
စတစ်ထဲ ထည့်ပြီး လူကြုံရှိရင် ပို့ပေးနော်
ဗာဂိုးချင်းတူတူတွေ ဆိုတော့ ဇာတ်ကားကြိုက်မိတာတွေလည်း တူမှာပဲ
ဇီဇီကတော့.. အဲလို တူရာတွေစု.. ဂရုပင်းလုပ်တာ…တော်တော်တော်တယ်..။
နောင်တစ်ချိန်မှာ အမေ ဆွိ ဆိုပြီးး နာမည်ကြီးးတော့မှာ..
စစ်ကားးတွေ စုပြီးး ပွားးမို့ အရင် သတ္တိမွေးးနေတယ်..
အညွှန်းနဲ့ တင် ကျိချင်လှပါပီ
ဝုန်းဒိုင်းကြဲတဲ့ကားတွေပို ကြိုက် လို့ ထင်ပါ့
စိတ် က ထစ်ကနဲဆို ဝုန်းချင်နေတာ ခ်ခ်
တူတူ ပဲ.. ခပ်အေးးအေးး ကားး ဆို ညွှန်းးသူ ၂ ယောက် အထက်ရှိမှ ကြည့်တယ်..
နံပါတ် ၁ က အညွှန်းဖတ်၊ ပိုစတာကြည့်တော့ မင်းသားရဲ့မျက်လုံးနဲ့ မျက်လှည့်ပညာ အင်မတန်လိုက်ဖက်မယ့်ပုံရှိလို့ ကောင်းမှာပဲလို့ ထင်တယ်။
နံပါတ် ၂ ကတော့ Rating 8.5 ရှိပေမယ့် (ဒီ၃ကားထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်ပေမယ့်) အငြိုးအတေးတွေ၊ ဒုက္ခသုက္ခတွေများလွန်းလို့ စိတ်ပင်ပန်းမယ့်ပုံပေါက်လို့ သိပ်မကြည့်ချင်ဘူး။
အညွှန်းဖတ်ပြီး စိတ်အ၀င်စားဆုံးကားကတော့ နံပါတ် ၃ ပဲ။
မျက်လှည့်ရှိုးမှာတင် တရားဝင် ကြေညာပြီးမှ ဘဏ်ကိုဖောက်ဖို့ လုပ်တာမို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ သူခိုးကြီးငတက်ပြား လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပေ့ါ……..
ပထမ ကားနဲ့ ဒုတိယကားက မင်းသားတွေ အကုန်လုံးက အမူအရာ အရရော ကောင်းကြလို့ ဒီ ကားတွေ နာမည်ကြီးတာ ချစ်မ။
ဘရင်းန် ကြက်ပေါင်းရည် အဲဒမှာ ဘယ်ဇေးယှိလဲ လူမှိုက်ခင်ဈော်
တတိယကားကို အတော်ကလေး နှစ်သက်တယ်
ဒုတိယကား ကိုတော့ ပြန်ကြည့်ပါအုံးလို့ ညွှန်းချင်ပါရဲ့။
ဟျူဂ်ျ ဂျက်ခ်မင်န်း ရဲ့ ရှိုးမန်းရှစ်ပ် အတော် အမှတ်ရတဲ့ကား လို့ပြောနိုင်သေး။
တကယ်က ဇာတ်ရုပ်အရမှာ သူက အတော် သနားဖို့ကောင်းတာဗျ…
စကားဂျို ကတော့ ..အင်း… စကားဂျို ပေါ့ဗျာ…
ဒုတိယကားမှာ အဲဒီ အချက်ကို မပြောချင်လို့ ချန်ခဲ့တာပါဆို။
အမှန်တော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ ပြကွက် တစ်ခုအတွက် တစ်ယောက်က အရိုးရှင်းဆုံး လှည့်ကွက်တစ်ခုကို ပိုင်တယ်။
နောက်တစ်ယောက်က အဲဒီ ပြကွက်အတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး ရှာရတယ်။
အဲဒါမှာ Hugh Jackman က သနားစရာ ကောင်းသွားတာ။
illusionist ကို နည်းနည်း မျက်​စိလည်​တယ်
prestige နဲ့ now you see me ကို အတော်ကြိုက်​တယ်
မျက်​လှည့်သက်​သက်ထက် အားပြိုင်​မှုတွေ ပြကွက်​တစ်​ခုအတွက် ကြိုပြီး ပြင်​တာတွေပါ ပါလို့ အဲ့ဒါတွေက ပိုစိတ်​ဝင်စားအောင် လုပ်​သွားသလားပဲ
illusionist က မျက်စေ့မလည်ပါဘူးးး
လည်ချင်းလည် prestige က လည်ရမှာ။
Prestige ကို မလည်​ဘူး
illusionist ကျမှ ကြည့်ရင်း ပျင်းလာတာ
ကျနော် အက်​ရှင်​ကားတွေနဲ့ပဲ အစပ်​အဟပ်​တည့်တယ် ထင်​ပါရဲ့
Illusionist ကိုတော့ ကြိုက်မိတယ် ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်လေးတွေ ကြိုက်လို့။
Now You See Me ကတော့ နည်းနည်း ယုတ္တိမဆန်ပေမယ့် သဘောကျမိတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ။
လှည့်ကွက်တွေ ကြိုက်ရင် prestige ကိုလည်းး ကြည့်ကြည့်
လာအားပေးတာ ကျေးကျေးပါ မိုက်မိုက်။
Edward Norton ကို American History X (1998) မှာ အကြိုက်ဆုံးပဲ…
အဲသည့် ဓာတ်ရှင် ၃-ကားစလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်…
အကြိုက်ဆုံးကတော့ Now you see me (2013)…
မော်ဂင်ဖရီးမန်းကို အကြိုက်ဆုံး…. ခွိ
မော်ဂန်ဖရီးမန်း က ဘယ် ကားဖြစ်ဖြစ် အမူအရာ က သင့်တော်နေသလိုပဲနော်။
Edward Norton ကို ဒီ မျက်လှည့်ကားပြီး မှ Incredible Hulk ကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်တာ။ ဒီ မတိုင်ခင်က မသိဘူး
အပေါ် (၂)ကားတော့ မကြည့်ရသေးဗျာ…
ဒါပေမယ့် Now you see me ကတော့ ရင်ထဲညှိတဲ့ကားပဲဗျာ…
အပေါ် ၂ ကားး
ကိုဖက်လို ရုပ်ရှင်သရဲ က မကြည့်ရသေးးတာ ထူးးဆန်းးတယ်…
Now you see me ကို အရမ်းကြိုက်တာ.. ရဲအရာရှိကို အတော်ကြိုက်မိသွားတာကိုး…
ဟိုနေ့က Avengers ကားသွားကြည့်တော့မှ အဲ့ထဲမှ ပြန်တွေ့တယ်… ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ ငြင်းရသေး.. Now you see me ထဲက မင်းသားပါဆိုတာကို မဟုတ်ဘူးပြောနေလို့..
Avenger ထဲက Hulk က Now u see me ထဲက ရဲအရာရှိ..
နံပါတ် (၁) နဲ့ နံပါတ် (၃) ကြည့်ဖူးတယ် ..
နံပါတ် (၃) ကို မကြာခင်ကမှ ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက်ကြည့်ဖူးထားလို့ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတုန်း ..
ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အလွန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားတွေပါ ..
နံပါတ် ၂ လည်းး ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်..!!
Now u see me က ကြိုက်လွမ်းလို့ (၂)ခေါက်တောင်ပြန်ကျိရတယ်…
အပေါ်ဆုံးကားကတော့ နဲနဲအေးတယ်.. အလယ်ကား မကျိဖူးဘူး.. ရှာရရင်ကျိအူးမယ်
Now You See Me က
ဝါးးပေးးလိုက်တဲ့ ထဲမှာ ပါလာသေးးတယ်..
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လော်ဘီတွေရဲ့ အန္တရာယ်ရှိသောလှည့်ကွက်များ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပမယ့် အချိန်
တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာချိန်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုရေချိန်တွေဟာလည်း တဖက်နဲ့တဖက်အပြိုင်မြင့်တက်လာပါတယ် ။ ဒီလိုမြင့်တက်လာချိန်မှာ တချို.လော်ဘီတွေရဲ့ လှည့်ကွက်တွေဟာ
ပြည်သူလူထုအချို.ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ၊ မဲပေးမှားမှု ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်လာတာတွေအများကြီးတွေ.လာရပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ဘာသာရေးစတဲ့
ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လူတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အမျိုးမျိုးသောလှည့်ကွက်တွေကို (လှည့်ကွက်မှန်း သိ၍ (ဝါ) မသိဘဲ) အသုံးပြုနေကြပါတယ် ။ အဲဒီလှည့်ကွက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါသေးတယ် ။
လှည့်ကွက်တွေအကြောင်းမပြောခင် မျက်လှည့်အကြောင်းအရင်ပြောပါဦးမယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် မျက်လှည့်ဆရာကြီး စက္ကောမ ဆီမှာ မျက်လှည့်ပညာ လက်လှည့်ပညာတွေသင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အားလပ်ချိန်တော်တော်များများလည်းဆရာကြီးဆီသွားပြီး ဆရာကြီးပြောပြတဲ့ လူ့သဘောသဘာဝ နဲ့ လှည့်ကွက်သဘောတရားတွေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာဆည်းပူးမိခဲ့ပါတယ် ၊ ရှင်းရှင်း ပြောရရင်လှည့်ကွက်တွေကို မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချတတ်တဲ့ လူလိမ်တွေအကြောင်း ၊ လူလိမ်တွေရဲ့လိမ်နည်းတွေကို အများကြီးသိခဲ့ရပါတယ် ။ အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ရဲ့
အခြေခံသဘောတရားတွေကို နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြီးတွေအနေနဲ့အသုံးချလာတာ၊နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်တွေအနေနဲ့ အသုံးချလော်ဘီလုပ်လာတာတွေကို တော်တော်များများတွေ့လာမိပါတယ် ။
ပထမဆုံးနာမည်ကြီး လော်ဘီတွေသုံးနေတဲ့ လှည့်ကွက်က မျက်လှည့်မှာသုံးတဲ့
(Miss direction) ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲအခြေခံလှည့်ကွက်ပါ ။ မျက်လှည့်ပညာမှာ မျက်လှည့်ဆရာတွေဟာ ပရိတ်သတ်ကိုသူတို.ပြမယ့်အရာတွေကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး အခြားမဆိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ မျက်စိလည်အောင် လမ်းကြောင်းအလွဲတွေပေးတတ်ပါတယ် ။ အခုနိုင်ငံရေးမှာရောဘယ်လိုလမ်းကြောင်းအလွဲတွေပေးနေသလဲ ဆိုရင်…
(၁)စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရပြီးသယောင်လမ်းကြောင်း လွှဲပါတယ် ။
(၂) တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးပုံစံနဲ.လမ်းကြောင်းလွှဲပါတယ် ။
ဒေါ်စုက လူကိုမကြည့်နဲ့ ပါတီကိုပဲ ကြည့်မဲပေးပြောတော့ သူတို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ လူကိုမရွေးချယ်ရဘူးလား ဆိုပြီး မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရပြီးသယောင် ၊ ဒေါ်စုကပဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်မဲဆွယ်သယောင် ဖန်တီးပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုတာကို ပြည်သူတွေ မေ့ပြီး ၊ ဒီမိုကရေစီပဲ ကိုယ်ရွေးချင်တာရွေးမှာပေါ့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေမှားယွင်းအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ တိုက်ကွက်ပါ ။
နောက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲပြန်ပါသေးတယ် ။
လော်ဘီက တခါမှအားမပေးဘူးတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို အပြင်းအထန်အားပေးလာပြီး NLDမဲမရအောင် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်လာပြန်ပါတယ် ။ ဒါလည်းအဓိက လမ်းကြောင်းနဲ့လွဲအောင်လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ ။
သူတို့က ဒီမိုကရေစီ နဲ့ မညီလို့ထောက်ပြနေတာမဟုတ်သလို ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအားပေးချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ အဓိကမြှုပ်ထားတာက ၊ သူတို့ဖုံးကွယ်ထားတာက လွှတ်တော်ထဲမှာ နေရာယူထားပြီးသား ၂၅ကျပ်သားရယ် ၊ သူတို့ကြံ.ဖွံ.က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်ပြီး စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့အစိုးရဖန်တီးပြီး စစ်မှန်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်လာမှာကို ဆက်လက်တားဆီးမယ့်အစီအစဉ်ပါပဲ ။
အခုဒီမိုကရေစီနည်းအရ ကိုယ်ပေးချင်တာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးတွေတော်တော်များများနဲ့ ၊ နောက်ပြီး ငါကတိုင်းရင်းသားမို့တိုင်းရင်းသားပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကို ပြောပြချင်တာက
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမရသေးပါဘူး ၊ နောက်တချက်က ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း စစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ မဖြစ်ဖို့မသေချာသလောက် ၊ မဲခိုးမဲလိမ်ဖို့လုပ်မယ့် အရိပ်ယောင်တွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
ဒီတော့သူများတွေလမ်းကြောင်းလျှောက်လွှဲတဲ့နောက်လိုက်ယုံစားပြီး ထင်ရာမဲပေးမိရင် လက်ရှိအစိုးရကဆက်လက်အုပ်ချုပ်မယ် ။ပြည်သူ့ ဆန္ဒမပါတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံထဲက ပြင်သင့်တာတွေလည်းမပြင်ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ၂၅ ကျပ်သားကလည်း လွှတ်တော်ထဲအမြဲရှိမယ် ၊ နောက်နောင်များစွာလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်း ဒီလိုပဲ ခများတို့ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမိုကရေစီအရ ရွေးချင်ရာရွေးပြောမယ် ၊ ပြီးရင်မဲခိုးမဲလိမ်တာတွေဆက်လုပ်မယ် ၊ အစိတ်သားနဲ့ပေါင်း အစိုးရဖွဲ.ပြီး ဒီမိုကရေစီ နာမည်ပြ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအစဉ်အဆက်ဆက်လုပ်ချင်တဲ့ ကလိမ်ကကျစ်ဉာဏ်တွေပါပဲ ။
လော်ဘီတွေ ချမပြရဲဘဲ နောက်ကွယ်မှာဖုံးကွယ်ထားတာလည်း ဒီအချက်တွေပါပဲ ။ NLD ပါတီအနိုင်ရလာရင် အစိုးရဖွဲ.နိုင်ခဲ့ရင်စစ်မှန်တဲ့အရပ်သားအစိုးရဖွဲ.ပြီး နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုယ်ကြိုက်ရာတွေကို ရွေးချယ်နိုင်တော့မှာပါ ။ အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ စစ်အစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီး စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိတဲ့ပါတီဟာ NLD ကလွဲလို့မရှိပါဘူး ။ ဒီတော့ အများပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျဆိုတာ အခုအချိန်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကိုအရင်ချပေးမယ့် လူကိုမဲပေးရမှာပါ ။ ဒီမိုကရေစီနည်းကို အရင်ခြေခြေမြစ်မြစ် ပုံစံချပြီးမှသာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျမဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း လမ်းကြောင်းအလွဲတွေနောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ သူတွေကိုသတိပေးလိုက်ရပါတယ် ။
အခြားအမျိုးမျိုးသော ( Miss direction) လှည့်ကွက်တွေကိုလည်း ဆက်လက်ကြည့်တတ်ရင်မြင်နိုင်မှာပါ ။ ဥပမာ ၅၉(စ) ပြင်မယ်လုပ်နေချိန် ခေါင်းလောင်းဆိုပြီး နာမည်ကြီးအောင်ထလုပ်တာ ၊ ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာလည်း ဆန်သယ်ယူမှုတားမြစ်လို့ လူတွေငတ်ပြဿနာတွေတက်တော့ တရုတ်မြန်မာအဓိကရုဏ်းဖန်တီးတာ အစရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းလွှဲလှည့်ကွက်တွေအများကြီးမြင်လာနိုင်မှာပါ ။
နောက်မျက်လှည့်မှာ အသုံးများတဲ့ အခြေခံပြကွက်က (Point ) ထုတ်တယ် တနည်း
(Highlight ) လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပြကွက်တစ်မျိုးပါ ။ ဒီနည်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဥပမာပေးရရင်
လူတယောက်ရှေ.မှာ လက်ညိုးနှစ်ချောင်းထောင်ပြပြီး လက်ဘယ်နှစ်ချောင်းရှိလဲ မေးရင် ၊
၉၉ရာခိုင်နှုန်းဟာ နှစ်ချောင်းလို့ဖြေကြပါတယ် ။ အောက်မှာကွေးနေတဲ့ လက်သုံးချောင်းမမြင်နိုင်တော့ဘဲ အပေါ်မှာထောင်ထွက်နေတဲ့လက်နှစ်ချောင်းကိုသာမြင်ပြီး မေးတဲ့မေးခွန်းလည်းသေချာ
မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲ အမြင်တွေလွဲချော်သွားစေတဲ့ နည်းပါ ။
ဒီနည်းကို ဘယ်မှာသုံးနေသလဲဆိုရင် အခုခေတ်စားနေတဲ့ ” အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာ ” အဲဒီလို Point ထုတ်ထား၊ Highlight လုပ်ခံထားရတဲ့အရာပါ ။ အဲဒါကြောင့် ထမင်းကြမ်းနဲ့ငပိစားရရင်နေပါစေ ၊ အမျိုးဘာသာအပျောက်မခံနိုင်ဘူး ၊ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လည်းရတယ် အမျိုးဘာသာ အပျောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်အောင် အလုပ်ခံထားရတာပါ ။ ထင်ရှားအောင် ထုတ်ပြထားတဲ့အရာလေးပဲမြင်ပြီး အခြားဆက်စပ်တွေးတောသင့်တဲ့အရာတွေ မြင်သင့်တဲ့အရာတွေအကုန်ပိတ်သွားအောင် ထုတ်ပြခြင်းခံရတာပါ ။ ဒီလိုခံရတဲ့အထဲမှာ ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ.စာတတ်ပေတတ်ရဟန်းသံဃာတွေအများကြီးပါပါတယ် ။ ဆရာတော်တွေနဲ့ ရဟန်းတော်အများစုဟာ ဗုဒ္ဓ
စာပေပတ်ဝန်းကျင်မှာသာအနေများပြီး ရိုးသားဖြူစင်ကြတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပိုပြီးတော့ လိမ်လို့ကောင်းပါတယ် ။ ပြီးတော့တချို.ပြောတာရှိပါသေးတယ် ဆရာတော်ကြီးတွေသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုပါ ၊ မှန်ပါတယ် ဆရာတော်ကြီးတွေသီလသမာဓိပညာရှိပါတယ် ၊ သို့သော် သီလသမာဓိတွေက လူလိမ်တွေနည်းကို မသိနိုင်ပါဘူး ။ ဒီတော့အလိမ်ခံရနိုင်ပါတယ် ။
အခု လော်ဘီတွေလိမ်နေတဲ့ အကွက်က အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာကို ပေါ်လွင်အောင်ထုတ်ပြတယ် ၊ ပြီးတော့ဘာသာသာသနာကို တကယ့်ညစ်နွမ်းအောင်လုပ်နေတဲ့အစိုးရကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး မဆိုင်တဲ့ အတိုက်အခံ NLD ကို
လမ်းကြောင်းလွှဲပြီးအပြစ်ပုံချတဲ့အကွက်တွေပါ ။ အမျိုးဘာသာသာသနာကို အကြောင်းပြမဆီမဆိုင်တိုက်ခိုက်လို့ NLD ပြိုလဲခဲ့ရင် ပြည်သူတွေကိုစစ်ကျွန်သက်တမ်းပိုရှည်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ရင်းပါ။ မျက်လှည့်မှာအဆင့်မြင့်ပြကွက်တွေဆို အခြေခံသဘောတွေ တစ်ခုထက်ပိုတာတွေ အများကြီးရောထားသလို ဒီဟာကလည်း နှစ်မျိုးရော ထားတယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင် ဘက်ပေါင်း
စုံ ဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေမစဉ်းစားတဲ့ သူတော်တော်များများဟာ လော်ဘီတွေရဲ့လှည့်ကွက်တွေထဲ ဝဲလည်နေပြီး အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စစ်အစိုးရပြုတ်ကျပြီး အရပ်သားအစိုးရစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ရယ် ၊ တရား
ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတာရယ် ၊ စီးပွားရေးဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိမှ နိုင်ငံတိုးတက်မှသာ အမျိုးဘာသာဟာတောက်ပနိုင်မယ်တိုးတက်နိုင်မယ်ဆိုတာကို လုံးဝမမြင်တော့ပါဘူး ။ အတင်းဇွတ်မျက်စိမှိတ်ပြီး အမျိုးဘာသာသာသနာအော်မယ် ၊ ပြီးတော့ အခြားအရာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့
အကြောင်းအရာတွေရှင်းပြရင် အမျိုးဘာသာကို အဓိကမထားလို့ဆိုပြီး သစ္စာဖောက်တို့ကုလားအားပေးဆိုပြီး သမုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေများလာပါတယ်။
ဒီတော့ အမျိုးဘာသာကာကွယ်မယ်ဆို ဥပမာပေးရရင် ပျက်ဆီးယိုယွင်းနေတဲ့ ပြိုအံ့ဆဲဆဲအိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ခေါင်းရင်းက ဘုရားစင်လေးပဲရွေးပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး၊အိမ်ခြေအိမ်နံရံအိမ်အမိုးအကုန်ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နိုင်မှ ဘုရားစင်လည်း သူနေရာနဲ့သူတင့်တင့်တယ်တယ်သပ္ပါယ်နိုင်မှာပါ ၊ မဟုတ်ရင်အိမ်ပြိုရင်ဘုရားစင်တစ်ခုတည်းကွက်ကျန်မနေခဲ့ပါဘူး ၊ အကုန်လိုက်ပြိုမှာပါ ။
ဒီတော့ ထုတ်ပြထားတဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာလေးပဲမြင်နေတာရပ်ပြီး အခြားအရေးကြီးတဲ့
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမြင်တတ်ကြပါလို့ သတိပေးချင်ပါတယ် ။
(Color trick) လို့လည်းခေါ်တဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ရောထွေးအောင်လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေပါပဲ ။
လူတော်တော်များများ က အကြောင်းအရာတွေကို တလွှာချင်းခွဲထုတ်ပြီး သုံးသပ်တဲ့သူတော်တော်
နည်းပါးပါတယ် ။ မျက်စိရှေ.မှာ အဝါရောင်ပုဝါလေးပြပြီး လက်ထဲကို ထိုပုဝါပုံစံအရောင်တူတစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်ရင် ဘာမှန်းသေချာမကြည့်တော့ဘဲ အဝါရောင်မြင်တာနဲ့ ခုနကပုဝါအဝါဆိုပြီး အသေအချာကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့သူကများပါတယ် ။ ဒီလိုရောရောထွေးထွေးရောချတဲ့ပြကွက်တွေကို လော်ဘီလုပ်နေတဲ့သူတွေသုံးတာတော်တော်များပါတယ် ။
ဥပမာ ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်စားရတာ မထူးဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးကိုလော်ဘီလုပ်တာဟာ ခုနကနည်းပါပဲ ။ အစိုးရဆိုတဲ့အရောင်ချင်း တူပေမယ့် အမျိုးအစားမတူပါဘူး ။
နောက် နာမည်ကြီးအွန်လိုင်းလော်ဘီတစ်ယောက်သုံးနေတဲ့ပုံစံဆိုရင် ဒေါ်စုတို့အစိုးရတက်လာလည်း တိုင်းပြည်ကချက်ခြင်းကောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး ၊ ဒီလိုပဲပြဿနာတွေတက် ၊ ဆန္ဒတွေပြ ၊ အဲ့ကျကျောင်းသားတွေသံဃာတွေဖမ်းဆီးဦးမှာပဲဆိုတဲ့ ပြကွက်ကိုသုံးလော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အောက်က ရွှေပွဲလာပရိတ်သတ်တွေကလည်း အစိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရောင်တူတာပဲမြင်ပြီး ရပ်တည်ချက်မတူတာကိုမမြင်နိုင်တော့ပါဘူး ။ ဒါကိုတမျိုးဆီခွဲရှင်းထုတ်ပြရရင် ဒေါ်စုနဲ့ NLD ပါတီရဲ့ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့နောက်ခံကမတူပါဘူး ။ NLD ပါတီရဲ့နောက်ခံက
ပြည်သူလူထုပါ ၊ဒီတော့သူတို.ပြောသလို့ ဒေါ်စုတို့ကမကောင်းရင် ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘဲအလိုလိုပျက်သုန်းသွားမှာပါ၊စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပါတီကတော့ မရမက ကလိမ်ကကျစ်နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ပြည်သူကျေနပ်နပ်မနပ်နပ် မျက်နှာပြောင်တိုက်ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ ။ ဒီလိုကွာခြားတဲ့အတွက် NLD ပါတီအနိုင်ရလာရင် လက်ရှိအာဏာရအစိုးရလိုပြည်သူ့မျက်နှာမထောက်ထင်တိုင်းကြဲလိုမရပါဘူး ။ ကြဲရင် ၅နှစ်ပြီးအလိုလိုပြုတ်ကျသွားမှာပါ ။
ဒါက အရောင်တူပေမယ့် (Issue) အကြောင်း
ချင်းရာနဲ့ ပုံစံမတူတာကိုခွဲထုတ်ပြတာပါ ။ ဒီတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဖြစ်လို့ ပြဿနာတက်တဲ့အခါ မဖြေရှင်းတတ်လို့ ” ကျောင်းသားလေးတွေရိုက်လို့ ပြန်ရိုက်ရပါတယ် ” ပြောတိုင်းဒေါ်စုကလိုက်ပြောမယ်လို့ပြောနေတာကတော့ တမင်ရှုပ်ထွေးအောင်လော်ဘီလုပ်ချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ် ။
နောက်ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ပါတီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ ကွာခြားချက်အကြီးကြီးက ဦးသိန်းစိန်ပါတီက
ကိုယ်ကျိုးရှာစားထားတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ ၊ ဒီတော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်တိုင်း ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုမူတည်တဲ့မူဝါဒတွေသာ
ချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။ နောက်
ချက်တိုင်းကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အတွက်
ပယ်ချတာကြီးပါပဲ ။ ဒါကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ အာဏာရအစိုးရဟာပုံစံမပြောပါနဲ့ အရောင်ချင်းတောင်မတူပါဘူး ။ ဒီတော့လော်ဘီတွေရဲ့ရောရောထွေးထွေးဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုရောယောင်ပြီးအဟုတ်မှတ်မနေပါနဲ့ ၊ စစ်ကျွန်သက်ရှည်ဖို့လမ်းတွေကြီးသာဖြစ်ပါတယ်လို့ ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။
နည်းက ( illusion ) လို့ခေါ်တဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားအမြင်မှားအတွေးမှားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ ။ မျက်လှည့်ပညာမှာဆို အရောင်တွေ၊မီးတွေ၊ပုံစံအမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေအရာဝတ္တုတွေကိုသုံးပြီး အလင်းအမှောင်သဘောတရားတွေနဲ့ လူ့မျက်စိအမြင်ကိုလှည့်စားတဲ့
ဥပမာထင်ထင်ရှားရှားပြရရင် The Voice ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆရာတော်တွေကိုလက်အုပ်ချီတာကို ဗလီဆရာတွေကို
ကန်တော့ နေဟန် လိုရာလေးဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြီး လူတွေအထင်အမြင်လွဲမှားအောင် လုပ်တာအဲဒါ အမြင်ရောထွေးစေတဲ့ (illusion)ပါပဲ နောက်
ဒေါ်စုသားအကြီးသူ့ဘာသာမုတ်ဆိတ်မွှေးထားတာကိုလည်း ကုလားဖြစ်ပြီဆိုပြီးပြောတာမျိုးတွေ ၊ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုယ်တိုင် ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာ ဒေါ်စုကားမောင်းသူကို အဲဒါ ကုလား ၊ မွတ်ဆလင် ၊ ဆိုပြီး (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင်) မုသာဝါဒ ၊ (အရပ်ပြောပြောရင် ) ကလိမ်ကကျစ်ကျတာလည်း အဲဒါ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေအောင် အမြင်မှားယွင်းအောင်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အောက်လုံး ( illusion ) တွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီတော့အားလုံးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောချင်တာက ခများတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းဟာ မှန်မနေပါဘူး ။ ” ငါ့မျက်လုံးနဲ့တပ်အပ်မြင်တာတို့ ၊ ငါ့ရှေ.မှာဖြစ်သွားတာကွ ၊ အဲဒါအမှန် ” လို့ပြောတိုင်း မျက်လှည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ မျက်လှည့်
သဘောတရားကိုနားလည်တဲ့ သူတွေက ခများတို့ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတာ
မမေ့ပါနဲ့ ။ မျက်လုံးနဲ့မြင်တာပဲ ၊ မုတ်ဆိတ်ပါကုလားပဲ ၊ အသားမဲကုလားပဲလုပ်နေသ၍
ကတော့ ခများတို့တသက်လုံးသူများလိမ်တာခံနေရမှာပါ ။ ဒီတော့နိုင်ငံရေးအောက်လုံးမှာသုံးနေတဲ့ (illusion) သဘောတရားတွေကိုလည်း သဘောပေါက်ပြီး အကြောင်းအရာကိုသေချာ ဂဃနဏသိအောင် လုပ်ကြပါ ။
ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ နိုင်ငံရေးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ( Tricks ) လို့ခေါ်တဲ့လှည့်ကွက်တွေပါပဲ ။ ဘယ်အရာမဆိုကောင်းတဲ့ဖက်မှာအသုံးပြုရင်ကောင်းတာဖြစ်ပြီး မကောင်းတဲ့ဖက်မှာအသုံးချရင် မကောင်းတဲ့အရာပါပဲ ။အခြားနည်းတွေကိုလည်းနောက်အလျဉ်းသင့်သလိုဖော်ပြပါ့မယ် ။ အခုလော်ဘီတွေသုံးနေတဲ့ တိုက်ခိုက်နည်းတွေဟာ အခုပြောပြထားတဲ့အချက်တွေထဲကမလွတ်ပါဘူး ၊ ဒီနည်းတွေကိုပဲအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်သုံးပြီး အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်အောင်ကြံဆောင်နေကြတာပါ ။ ဒီတော့ ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေအမြင်မှား၊အထင်မှား၊အတွေးမှားတွေမဖြစ်အောင် သိပြီးသားသူတွေကတတ်နိုင်သမျှ ဖြေရှင်းပေးကြပါ ၊ ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ ။ အတွေးအမြင်အမှန်တွေကိုချပြပေးကြပါ ။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်းခဲ့ရင်ဖြင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲ အောက်ကပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံ အာဏာရှင်စနစ် လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတာလည်းသတိပေးချင်ပါတယ်ခမျာ။ဒီတော့ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တခုတည်ဆောက်ဖို့ NLD ပါတီကိုဝန်းရံပေးကြပါလို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ် ။